News Code : 634173
Source : msm+abna
၃၂၂။ ။ မေး။ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တစ်ဦး အား မေတ္တာလက်ဆောင်အဖြစ် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သည့် ရှရီအီ အမိန့် ရှိပါသနည်း ? အကယ်၍တစ်ဦး တစ်ယောက် အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့ မိမည်ဆိုလျှင် ပြန်ပြီးတောင်းခံရ မည်လား ဆိုတာ လေး သိလိုပါတယ် ?
. မေး။ အကယ်၍ အိမ်နီးချင်းအိမ် က သစ်သီးပင်၏ အကိုင်းများမှတဆင့် သီးနေသည့် သစ်သီးများ တန်တိုင်ကိုကျော်ပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်ဝန်းထဲရောက်နေပါသည်။၎င်းသစ်သီးများကို စားသုံးခွင့် ရှိမရှိ ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျား။
. မေး ။ အဗ်ဒွလ္လာဟ် ၊ဟဘီးဘွလ္လာဟ် စသည်ဖြင့်နာမည် မှည့်ထားသူများ ၏အမည်များကို ဝဇူမရှိဘဲရေးသားမည်၊ထိတွေ့မည်ဆိုလျှင် မည်သည့် ရှရီအီ အမိန့် ရှိပါသနည်း ?
ဖြေ ။ ။ ((အလ္လာဟ်)) ဆိုသည့် အမည်တော်အား သွာဟာရသ် ( ဂူစ်လ်(သို့) ဝဇူ (သို့) သယာမွန်မ် ) မရှိဘဲ ထိတွေ့ခွင့် မရှိချေ။
အေစ်သေဖ်သာအသ် သေ အေမာမ်ခိုမေနီး အတွဲ (၁) ၊ စာမျက်နှာ ၄၈ ၊မေးခွန်းအမှတ် ၈၂
. မေး။ တီဗီ ၊မိုနီတာ နှင့်မိုဘိုင်း မျက်နှာပြင်တွင် ရှိနေသည့် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်၏ အာယတ်တော်များကို ဝဇူ မရှိဘဲ ထိတွေ့ ခွင့်ရှိပါသလား?
. မေး။ အကယ်၍ ခင်ပွန်းသည် မှ မိမိ၏ ဇနီး အား စေလာယေရဟ်မ် ( အထူးသဖြင့် မိဘနှစ် ပါး ကိုတွေ့ဆုံ ခြင်း) လုပ်ခြင်း ကို တားမြစ်မည် ဆိုလျှင် ဇနီးအတွက် မည်သည့် တာဝန် ရှိပါသ နည်း ? ခင်ပွန်းသည်၏ ခွင့်ပြုချက် မယူဘဲ မိဘနှစ်ပါး နှင့် တွေ့ရန် သွား နိုင်ပါသလား?
. မေး။ မနုဿ လူသားအနေဖြင့် မိမိ၏ ဇနီး နှင့် အရွယ်မရောက်သေးသည့် သားသမီးများ ကို နမာဇ် ဝတ်ပြုရန် အလို့ငှာ နိုးထပိုင့်ခွင် ရှိပါသလား ?
. မေး ။နမာဇ် မဖတ်သူ (သို့) နမာဇ်ကို လက်မခံသည့် သူ(သို့)သူမ အတွက် ကုရ်အာန်ခွာနီ လုပ်ပိုင် ခွင့် ရှိပါသလား ?